Soosaarayaasha Dahabka iyo Alaabada - Warshadda Dahabka ee Shiinaha
Xirmooyinka Dharka jumlada ah Oval-ka Birta Qurxinta DIY Gacanta Qalabka Shisheeyaha Shiinaha ee Shiinaha 512528
Xaraashka Gacan-ku-iibinta Xarkaha Gacan-ku-xidhka Diy-ga ah ee loo yaqaan 'Dibo Embroidery Kit' ayaa isticmaala gacmo-gacmeed saddex-geesood leh, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Xirmooyinka Dharka jumlada ah Oval-ka Birta Qurxinta DIY Gacanta Qalabka Shisheeyaha Shiinaha ee Shiinaha 512529
Xirmooyinka Dharka jumlada ah Oval-ka Birta Qurxinta DIY Gacanta Qalabka Shisheeyaha Shiinaha ee Shiinaha 512552
Qurxinta-iibinta kulul Qurxinta midabbada badan leh (hilqadaha) Hilqadaha dunta ah ee Diy Embroidery Kit loo isticmaalo gacmo-sameysmo daabac leh oo saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Xirmooyinka Dharka jumlada ah Oval-ka Birta Qurxinta DIY Gacanta Qalabka Shiinaha ee Shiinaha
Qalabka aadka loo iibinayo ee aadka u weyn (Midab weyn oo weyn) (Pink big) Thread Embroidered Diy Embroidery Kit wuxuu isticmaalaa daabac gacmeed laga sameeyay saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Xirmooyinka Dharka jumlada ah Oval-ka Birta Qurxinta DIY Gacanta Qalabka Shisheeyaha Shiinaha ee Shiinaha 512553B
Qalabka iibinta kulul ee weyn (Midabkiisu weyn yahay) Dunta Tilmaameedka Diy Embroidery Kit isticmaal gacmeed - lagu sameeyay daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si ay u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Xirmooyinka Dharka jumlada ah Oval-ka Birta Qurxinta DIY Gacanta Qalabka Shisheeyaha Shiinaha ee Shiinaha512559A
Hilqado kulul oo iibinaya (Casaan qaali ah) Dunta Tilmaamaysa Diy daabacaadda Qalabka isticmaal gacmeed - laga sameeyay daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si ay u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Xirmooyinka Dharka jumlada ah Oval-ka Birta Qurxinta DIY Gacanta Qalabka Shisheeyaha Shiinaha ee Shiinaha512553C
Qalabka aadka loo iibinayo ee aadka u weyn (Jaale weyn) Dunta Tilmaamaysa Diy Embroidery Kit adeegso gacmo - lagu sameeyay daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Xirmooyinka Dharka jumlada ah Oval-ka Birta Qurxinta DIY Gacanta Qalabka Shisheeyaha Shiinaha ee Shiinaha512559B
Hilqado kulul-iibin ah (Midab casaan qaali ah) Mawduuc Diin ah oo lagu Duubo Qalabka la isticmaalay gacmo-gacmeed lagu sameeyay daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si ay u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Xirmooyinka Qalabka Jumlada ah Oval-ka Qurxinta Oval DIY Gacanta Qalabka Shisheeyaha Shiinaha ee Shiinaha 512559C
Hilqado kulul oo iibinaya (Jaale qafiif ah) Dunta Tilmaamaysa Diy daabacaadda Qalabka isticmaal gacmo-sameysmo daabac leh oo saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si ay u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.